EBOLA Oo Markii U Horaysay Lagu Arkay Ethiopia - #1Araweelo News Network | #1Araweelo News Network
EBOLA Oo Markii U Horaysay Lagu Arkay Ethiopia
Addis-ababa(Araweelo News Network) Cudurka Ebola, ayaa markii u horaysay lagu arkay Dalka Ethiopia. Kadib markii qof aan magaciisa la shaacin oo ah Dublamaasi u dhashay asal ahaan dalalka Galbeedka Afrika ee cudurku ku faafay lagu arkay xumadda Ebola, kaas oo la geeyay Cusbitaalka guud ee Addis-abab Saint Yared General Hospital.
Sidoo kale 3 qof oo la rumaysan yahay in ay qabaan Cudurka Ebola, ayaa lagu arkay Cusbitaalka Black lion hospital, balse shaqaalaha Cusbitaalada iyo dhakhaatiirta ka hawlgala, ayaa ka gaabsaday in ay jawaabo ka bixiyaan dadka looga shakiyay in qabaan Cudurka Ebola ee lagu arkay Cusbitaaladdaa.
Dhinaca kale Xukuumadda Dalka Ethiopia, ayaa ku gacansaydhay in ay jaaabo waafiya ka bixiso jiritaanka cudurkaa oo lagu arkay dalkeeda, waxayna dawlada Ethiopia hore ugu gacansaydhay warar Bilihii August iyo September ee lasoo dhaafay sheegayay in lagu arkay dalkeeda astaamaha dad qaba cudurka Ebola.
Wasiirka Caafimaadka Dalka Ethiopia Keseteberhan Admassu (MD), ayaa sheegay in in cudurka Ebola in aanu khatar ku ahayn Ethiopia. Sidaa awgeed aanay joojinayn diyaaradaha ka imanaya Galbeedka Afrika, balse waxa uu sheegay taa bedelkeeda in Dawladu masuul ka tahay in ay dalka ka ilaaliso cudurkaa.
Dawada Ethiopia, waxay ka mid tahay Dalalka Bariga Afrika ee gacansiga ugu badan la lahaa dalalka Galbeedka Afrika ee Cudurka Ebola ka dilaacay, waxayna Diyaaradeheedu weli sii wadaan duulimaadyo badan oo dhinaca galbeedka Afrika ah.
Cudurka Ebola oo dhawrkii bilood u danbeeyay dhibaato ku hayay dalalka Galbeedka Afrika, isla markaana sababay dhimashada kumanaan qof, ayaa dhawrkii todobaad ee u danbeeyay u tahriibay dhinaca Qaaradaha Yurub iyo Ameerika. Kadib markii uu ka talaabay Baddaha Pacific Ocean iyo Mediterranean.
Dalalka Woqooyiga iyo koonfurta Qaarada Ameerika iyo sidoo kale Dalka Australia, ayaa sidan oo kale lagu arkay Cudurka Ebola markii u horaysay, kaas oo u muuqda inuu hadda si tahriib ah uga taalabay Baddaha Pacific Ocean iyo Mediterranean iyo Atlantic Ocean, balse wararkii u danbeeyay ee dhinaca dalka Ethiopia ee lagu arkay cudurkaa, ayaa muujinaya inuu jiro firxad soo galay dhinaca bariga Afrika oo Virus-ka Ebola.